नमूना विद्यालयको कक्षा ११ मा विद्यार्थी संख्या शून्य ! – Everest Dainik – News from Nepal
नमूना विद्यालयको कक्षा ११ मा विद्यार्थी संख्या शून्य !
विराटनगर, मंसिर १६ । विराटनगर महानगरपालिका-२ को जनता नमूना उच्च माध्यमिक विद्यालय आन्तरिक किचलो, खिचातानी र राजनीतिक हस्तक्षेपको चपेटामा परेको छ। डा. मिनेन्द्र रिजाल, अशोक राई समेतका नेता तथा उच्च सरकारी ओहोदामा पुगिसकेका धेरै व्यक्तिले अध्ययन गरेको विद्यालय आन्तरिक कलहमा फस्दा पठनपाठन खस्किँदै गएको छ।
विद्यालयमा किचलोको सुरु भएपछि अभिभावकले विकल्प खोज्न थालेका छन्। एक शैक्षिक सत्रमा १५ सयसम्म विद्यार्थी पठनपाठन गराएको विद्यालयमा अहिले एक सय ५० मात्रै विद्यार्थी छन्।
विज्ञान र शिक्षा शंकायमा पढाइ हुने कक्षा ११ मा विद्यार्थी नै छैनन्। एसईई उत्तीर्ण विद्यार्थीको रोजाईमा अर्कै विद्यालय हुँदा कक्षा ११ पूरै खाली छ। कक्षा १२ मा जम्मा चारजना मात्रै विद्यार्थी छन्। शिक्षक भने २० जना छन्।
२००९ सालमा स्थापना भएको विद्यालयमा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् स्वीकृति लिएर २०५३ सालदेखि कक्षा ११ मा पठनपाठन हुन थालेको थियो। सामुदायिकतर्फ कक्षा ११ मा अत्याधुनिक प्रयोगशालासहितको विज्ञान कक्षा संचालनका लागि अनुमति पाउने जनता नमूना पूर्वकै पहिलो सरकारी विद्यालय हो।
सरकारी विद्यालयमध्ये उत्कृष्ट पठनपाठन हुने गरेकै कारण २०६० सालबाट सरकारले आवाससहितको सुस्त श्रवण श्रोत कक्षा समेत संचालन गरेको थियो। अहिले यस कार्यक्रमको अवस्था पनि दयनीय छ।
विद्यालयका पूर्व कर्मचारी विजय सापकोटाका अनुसार २०६८ सालबाट विद्यार्थीको संख्या क्रमस घट्दै गएको हो। ‘२०६८ सम्म पढाइ पनि अत्यन्तै राम्रो थियो। विद्यार्थी भरिभराउ हुने गरेका थिए ।’ उनले भने, ‘त्यसपछि क्रमस विद्यार्थी घट्दै गए। अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीलाई त्यहाँबाट निकालेर अन्य विद्यालयमा लगेर भर्ना गरिदिन थाले।’
सापकोटाका अनुसार विद्यालय अचाक्ली राजनीति र आन्तरिक खिचातानीको शिकार बन्न पुग्दा शैक्षिक वातावरण नै धुमलिएको छ। उनले शैक्षिक वातावरण राम्रो हुँदा आठ वर्ष अघि विज्ञान र शिक्षा शंकाय गरेर कक्षा ११ मा एक सय ५० जनासम्म विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको जानकारी दिए।
सापकोटाले राजनैतिक दलले आफू अनुकूल संचालन गर्न खोज्दा र राजनैतिक पहुँचका भरमा शिक्षक थोपार्ने ुडम्पिङ साइडु बनाउँदा विद्यालय दिनप्रतिदिन धारासायी बन्दै गएको गुनासो पोखे।
यहाँ दरबन्दी रहेका अधिकांश शिक्षक पठनपाठनभन्दा पनि राजनीतिक गतिविधि र बाहिरी कार्यक्रममा बढी व्यस्त रहने उनले बताए।
ती शिक्षक विद्यालयमा पढाउनेभन्दा पनि बाहिरी गतिविधिमा बढी सक्रिय रहे उनले भने, ‘विद्यालय बेहालत बन्नुको मुख्य कारण शिक्षकको बेवास्था र राजनैतिक हस्तक्षेप नै हो। यसलाई सुधार गरेर लैजान सकिएन भने पूर्वकै नमूना भनेर चिनिएको विद्यालय अन्यत्र गाभ्नुपर्ने स्थिति नलाउला भन्न सकिदैन।’ अन्नपूर्ण पोस्टबाट